"အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဘာကို ကြောက်ကြတာလဲ" သမဂ္ဂတခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်ပွဲဝင်မယ်! - IUF Asia-Pacific
“အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဘာကို ကြောက်ကြတာလဲ” သမဂ္ဂတခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်ပွဲဝင်မယ်!
by IUF Asia/Pacific | Nov 17, 2021 | Women Unions & Power |0comments
“အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဘာကို ကြောက်ကြတာလဲ” စကားစုမှာ ယူကေ တက္ကသိုလ်များထဲက အမျိုးသမီး များအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးစားမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတွေအပေါ် Al-Jazeera စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနရဲ့ အားကောင်းသော အစီရင်ခံစာမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှု၊ မတရားပြုကျင့်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု အကြောင်းတွေကို အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပြီး အမျိုးသမီးများ၏ အားနည်းချက်များအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းက အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများကို လုပ်ငန်းခွင်များမှာ အကြောက်တရားများ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့စေပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများ အကြမ်းဖက်ခံရမှု၊ မတရားပြုကျင့်ခံရမှု ကြုံတွေ့စေသည့် အကြောင်းအရင်းများထဲက တခုမှာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပြည့်နှက်နေသည့် ပုံစံတကျနှင့်စနစ်တကျရှိသော အားနည်း ချက်ကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၄ နှစ်ကျော်ခန့်က ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ စားသောက်ကုန်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမှ အမျိုးသမီး သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းတွေကို အခြေခံကာ ပုံစံတကျဖြစ်သော အားနည်းချက် အမျိုးအစားများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးစလုံးတို့ဖြင့် ဖော် ထုတ်ပါသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်သည် ကိုယ်ထီးတည်းဖြစ်သည့်အခါ၊ ခရီးသွားသည့်အခါများမှာ ကြုံတွေ့တတ် ပါသည်။ ကိုယ်ထီးတည်းဖြစ်သည့်အခြေအနေကိုပြောရင် လုပ်ငန်းခွင်တခုက အမျိုးသားအများအပြားကြား အမျိုး သမီးအနည်းငယ်သာ ရှိနေခြင်းက သူတို့တွေကို အားငယ်စေပါသည်။ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီး တယောက်တည်း ကွင်းပြင်တွေမှာ သို့မဟုတ် စိုက်ခင်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေရတာမျိုး သို့မဟုတ် အရောင်းဝန်ထမ်းတွေလို အိမ်၊ ရုံးသို့ သွားလာသည့်လမ်းပေါ်မှာ သွားလာရင်း အလုပ်လုပ်ရတာမျိုးကို ဆိုလိုပါသည်။ အသွားအလာနဲ့ ပတ်သက် သည့် အားနည်းချက်ဆိုတာက အလုပ်ကနေ အသွားအပြန် အချိန်ကို ညွှန်းဆိုပါသည်။ ထိုထဲတွင် အများပြည်သူ သုံးယာဉ်တွေ ကျပ်တာ၊ အလုပ်ရှင်က စီစဉ်ပေးတဲ့ အကြိုအပို့ ပြွတ်သိပ်နေအောင် ကျပ်တာ၊ အလုပ်သို့ အတက်အ ဆင်းလုပ်ရန် အတင်းအကျပ် ခိုင်းစေခံရတာ၊ လုပ်ငန်ခွင်ကွင်းထဲသို့ သို့မဟုတ် ရေသွားခပ်ရသည့်အခါမျိုးတွင် အ ဝေးကြီး လမ်းလျောက်ရတာမျိုး ပါဝင်ပါသည်။
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အားနည်းချက်တွေအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွေဆွေးနွေးသည့်အချက်တွင် လုပ်ခလစာ နည်းပါးမှုနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေစေလောက်သော လုပ်အားခများပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ဟာ အမျိုးသမီးများအတွက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ အကြမ်းဖက်ခံရမှုမှ ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ မဖြစ်စေနိုင်သည့် အချက်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် နေအိမ် နှစ်ခုစလုံးတွင် အကြမ်းဖက်ခက်ရမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဆင်းရဲမွဲတေစေလောက်လုပ်အားခဖြင့် အလုပ်လုပ်နေရပြီး တခြား အလုပ်အကိုင် မရရှိနိုင်သည့်အခြေအနေမှာ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်သည့် စီးပွားရေးအရ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်မှု မရရှိနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အမျိုးသမီးသမဂ္ဂခေါင်းဆောင် တော်တော် များများက စုပေါင်းအရေးဆိုမှုမှတဆင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းထားသည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ခလစာ သို့မဟုတ် “လူနေမှုဘဝနှင့် ကိုက်ညီသော လုပ်အားခ”တွေက အမျိုးသမီးများ စီးပွားရေးအရ အားနည်းချက်တွေကို လျော့ချနိုင်သလို ထိုအားနည်းချက်ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာရသည့် အကြမ်းဖက်မှုကိုလည်း ဖယ်ရှားနိုင်ရန် အထောက် အကူဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ပါသည်။
စီးပွားရေးအရ အားနည်းချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့ဝင်များ ပြောဆိုသည့်အချက်တွေမှာ “ပိုင်ဆိုင်မှု” ပမာ အမျိုးသမီးများ ရင်ဆိုင်နေရသော အကြွေး/အနှောင်အဖွဲ့လုပ်သားနှင့်အကြမ်းဖက်မှု၊ မုဆိုးမများ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် အစိုးရ အကျိုးခံစားခွင့်များ မရရှိမှု၊ အမျိုးသားများမှ ရရှိသော မိသားစု အကျိုးခံစား ခွင့်များကို အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများ ငြင်းပယ်ခံရမှု အထူးသဖြင့် စိုက်ခင်းတွေမှာ အိမ်ယာနှင့် အလုပ်အားခ အပေါ် အကျိုးခံစားခွင့် (ဥပမာ – မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစားအစာဖြစ်သည့် ဆန်၊ ပြောင်း)၊ အလုပ်ခန့်ထားခံရမှု နှင့် ကျပန်းအလုပ်အကိုင် စီစဉ်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေ မတူညီတာတွေ တွေ့ရှိရပါသည်။
အလုပ်အကိုင်လျောက်ထားဖို့နဲ့ရရှိဖို့၊ အစမ်းခန့်ကာလ အောင်မြင်ဖို့၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု ဆန်းစစ်ချက် အောင်မြင်ဖို့၊ အမြဲတမ်းအလုပ်အကိုင် ရရှိဖို့ သို့မဟုတ် ယာယီအလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ် သက်တမ်းတိုးဖို့ အတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်ခံရမှုနှင့် မတရားပြုကျင့်ခံရမှုမှာ ကျယ်ပျံ့ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရသည့် အကြောင်း အရင်းတခုမှာ အလုပ်အကိုင်အာမခံချက်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများ ရာထူးတိုး ပေးမှုအပေါ် ကြီးမားသောလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြီးကြပ်ရေး ရာထူးများမှာ အမျိုးသားများ လက်ထဲ တွင်သာ ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကို တားဆီးဖို့ ထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေ မရှိသေးပါ။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် နှောင့်ယှက်မှုအတွက် “လုံးဝသည်းခံခြင်း” ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသော်လည်း – အကြီးဆုံး စားသောက်ကုန်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး တချို့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအပါအဝင် – တော်တော်များများမှာ စီးပွားရေဆိုင်ရာ အားနည်းချက်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မတရားအသုံးချမှုအပေါ် ဖြေရှင်းရန် ဘာမှ မလုပ်ဆောင်ကြပါ။ အဲဒီအစား အလုပ်ရှင် အများစုမှာ ကျပန်းအလုပ်အကိုင် အသုံးချမှု (နေ့စားဖြင့်ငှားရမ်းသော အာမခံချက်မရှိသည့် အလုပ်အကိုင်၊ ယာယီ အလုပ်အကိုင်ငှားရမ်းမှု သို့မဟုတ် ပြင်ပမှ ခေါ်ယူလုပ်ကိုင်စေမှု) တို့ကို အကာအကွယ်ပေးကြသည်။ ဒါက ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အကြောင်းအရင်း အားလုံးပါ။ အာမခံချက်မရှိသည့် အလုပ်အကိုင်များက အမျိုးသမီး များအတွက် စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်သည့် အားနည်းချက်ရဲ့ အခြေခံအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့်အပြင် သူတို့ရဲ့ စာချုပ်ကို သက်တမ်းတိုးပေးမယ် မတိုးပေးဘူးဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပေးမယ့် အမျိုးသားတွေရဲ့ နှောင့်ယှက်မှုနှင့် မတရားပြု ကျင့်မှုကို ကြုံတွေ့စေပါသည်။ ဒါက အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် အကြောက်တရား၏ အခြေခံ အရင်းမြစ် ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများ ဒီလိုအကြောက်တရားတွေ ဆက်ပြီးမကြုံတွေ့ကြစေဖို့ အလေးပေးလုပ်ဆောင်ကြရမည့်သူမှာ ကျွန်ုပ်တို့ သမဂများပဲ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ အလေးပေး ဆောင်ရွက်ကြရမည်။ သို့သော်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပုံစံတကျ အကြောက်တရားဖြစ်ပေါ်နေစေသည့် အရေး ကြီးဆုံး အခြေခံအကြောင်းတရားကိုလညး် ကျွန်ုပ်တို့ အမြစ်ဖြတ်ရမည်။ လုံခြုံမှုမရှိခြင်းနှင့် အကြောက် တရားလွှမ်းမိုးနေခြင်းတို့မှာ အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားမှု၊ ကျပန်းအဖြစ်ခိုင်းစေမှုနှင့် အာမခံချက်မရှိသော အလုပ်အ ကိုင်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။
“အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဘာကို ကြောက်ကြတာလဲ” နောက်ကနေပြီး အင်အားနှင့် အားနည်းချက်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ထုတ်ကာ သမဂ္ဂတခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်ပွဲဝင်ရမည်။
သမဂ္ဂအနေဖြင့် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေးနေ့ကို ပါဝင်အားဖြည့်ကြပါ။ ပြီးနောက် ရှေ့ဆက်နေ့ရက်တိုင်း အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ဖို့ လုပ်ဆောင်ကြရအောင်ပါ။ အမျိုးသမီးများ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေး၊ အကြောက်တရား ကင်းကင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ အလုပ်လုပ်ရေး၊ အလုပ်သမားအားလုံး အတူတကွ ရပ်တည်ရေးနှင့် အမျိုးသမီး များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေးအတွက် အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် အထောက်အပံ့ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ သမဂ္ဂ၊ ကျွန်ုပ်တို့ အင်အားကို အသုံးချရမည် ဖြစ်ပါသည်။
PDF Burmese – EVAW- what we fear as women